I-Suffragette ichazwe: Ngaba lixesha elichanekileyo?
Imbali kunye neNkcubeko Ukuxhatshazwa kwabasetyhini
Ukusetyenziswa kweBrithani kunye neMelika
Inkcazo: I- Suffragette yigama elalisetyenziswa ngamanye amaxesha ukuba ibhinqa elisebenzayo kulo mfazi likhuphe ukunyakaza.
Iphephandaba laseLondon liqale lisetyenzisile i-suffragette yegama. Abafazi baseBrithani ekunyanyeni kwe-suffrage bawamukela eli gama, kodwa ngaphambili kwexesha abasebenzisa ngalo "belithintela." Okanye, ngokuphindaphindiweyo, njengeSuffragette.
Iphephabhuku leWPSU, iphiko elidlulileyo lokuhamba, lalibizwa ngokuba nguSuffragette.
USylvia Pankhurst washicilela i-akhawunti yakhe yomzabalazo we-militant njenge -Suffragette: Imbali ye-Women's Militant Suffrage Movement 1905-1910 , ngo-1911. Yapapashwa eBoston nakwi-England. Kamva wapapasha i -akhawunti ye-Suffragette Movement -I-Akhawunti ebalulekileyo yabantu kunye neengcamango , ukuzisa ibali kwiMfazwe Yehlabathi I kunye nenqweno yamfazi.
E-America, abavukeli abasebenzela ukuvota kwabasetyhini bakhetha igama elithi "suffragist" okanye "umsebenzi onqabileyo." "I-Suffragette" ithathwa njengexesha elidakisayo eMelika, njengokuba "i-women's lib" (mfutshane "inkululeko yabesifazane") yayithathwa njengexesha elidibanisayo nelithiyayo kwi-1960s no-1970.
"I-Suffragette" e-America nayo yayithatha ininzi engqineliyo okanye impi yokuxhatshazwa ukuba amaninzi aseMerika ayenamabhinqa ayengafuni ukudibaniswa kunye, ubuncinci de u- Alice Paul noHartiot Stanton Blatch baqala ukuzisa ezinye zaseBrithani ezixhasayo eMelika.
Eyaziwayo Njenge: suffragist, okhuselayo
Iimpazamo eziqhelekileyo eziqhelekileyo: i- sufragette, i-suffragete, i-suffrigette
Umzekelo: kwinqaku le-1912, i-WEB Du Bois isebenzisa igama elithi "abagciniweyo" ngaphakathi kwinqaku, kodwa umxholo oyintloko wawuthi "Ukuhlupheka kweSuffragettes"
I-British Suffragettes ebalulekileyo
U-Emmeline Pankhurst : ngokuqhelekileyo uthathwa njengenkokheli enkulu yephiko elincinci lomfazi.
Udibene ne-WPSU (iNtlalontle yabaseNtlalontle kunye nezoPolitiko), esekelwe ngo-1903.
UMillicent Garret Fawcett : umkhankaso owaziwa "ngendlela yakhe yomgaqo-siseko", udibene neNUWSS (iNational Union of Women's Suffrage Societies)
USylvia Pankhurst : intombi kaEmmeline Pankhurst noDkt. Richard Pankhurst, yena kunye noodadewabo bobabini, uKristuabel no-Adela, babesebenza ngokunyakaza. Emva kokuvota ivoti, wayesebenza ekushiyeleni kwesobunxele kwaye emva koko ukunyuswa kwezopolitiki ezichasayo.
UKristuabel Pankhurst : enye intombi kaEmmeline Pankhurst kunye noDkt. Richard Pankhurst, wayenomdla osebenzayo. Emva kweMfazwe Yehlabathi, ndathuthela eUnited States apho wajoyina inxaxheba yesiBini se-Adventist kwaye wayengumshumayeli.
U-Emily Wilding Davison : umlindi kwi-suffragettes, wavalelwa kathathu. Wayephethwe ngokunyanzelisa amaxesha angama-49. NgoJuni 4, ngo-1913, wangena phambi kwehashe likaKumkani George V, njengenxalenye yoqhankqalazo ekuthandeni iivoti zabesifazane, kwaye wafa ngenxa yokulimala kwakhe. Umngcwabo wakhe, umcimbi osisigxina kwi-Women's Social and Political Union (WPSU), wathatha amashumi amawaka abantu ukuhamba ezitalatweni, kwaye amawaka e-suffragettes ahamba kunye nebhokisi lakhe.
UHartiot Stanton Blatch : intombi kaElizabeth Cady Stanton noHenry B.
UStanton nonina kaNora Stanton uBatch Baratch, uHartiot Stanton Blatch wayengumdlali onamandla osebenzayo ngexesha leminyaka engamashumi amabini eNgilani. Umbutho wezoPolitiki wezeNtombi, awayewuncede wafumana, wadibana kamva kunye no- Alice Paul 's Congressional Union, kamva waba yiqela leSizwe laBesifazane.
U-Annie Kenney : phakathi kwamanani aphezulu e-WSPU, wayevela kwiklasi yokusebenza. Wabanjwa waza wabanjwa entolongweni ngo-1905 ukuze adibanise intolitiki kwi-rally malunga nokuvota kwabasetyhini, njengoKristuabel Pankhurst, kunye naye ngaloo mini. Ukubanjwa kubonakala kubonakala njengesiqalo seendlela zobuqili ezinokunyakaza.
UMnumzane Constance uBulwer-Lytton : wayeyindoda efanelekileyo, naye wayesebenzela ulawulo lokuzalwa kunye nokuguqulwa kweentolongo. Ilungu laseBrithani, wajoyina iphiko eliphikisayo lomqhubi phantsi kwegama uJane Warton, kwaye wayephakathi kwabo bahamba ngesigxina esilambayo ejele laseWalton kwaye baxhaswa ngamandla.
Uthe wayesebenzisa i-pseudonym ukuphepha ukufumana nayiphi na inzuzo kwimvelaphi yakhe kunye nokudibanisa.
U-Elizabeth Garrett Anderson : udade ka-Emmeline Pankhurst, wayengowokuqala ugqirha waseBrithani enkulu kunye nomsekeli wabesifazane abaswele
UBarbara Bodichon : Umculi womdlali kunye nabasetyhini, ngokusesikweni kwimbali yentlangano - wakhicilela iiphamflethi kwi-1850s kunye ne-1860s.
U-Emily Davies : wasungula i-Griton College kunye noBarbara Bodichon, kwaye wayesebenzayo kwiphiko "lomgaqo-siseko" wentshukumo ye-suffrage.
Isizathu sokuba amabhinqa afanele aVote
Ukunyangwa kwamaBrutal kwabesetyhini abakwi-Occoquan Workhouse
Isikhokelo seNkxwaleko yabasetyhini
ISececa Falls Convention
Izizathu Zethu Ezizilishumi elinambini ze-Anti-suffragist Izizathu
Ngaba iiCigars zaseCuban Zomthetho e-US?
USybil Ludington: Umfazi Owesifazane UPawulos Uhlonipha?
Imfazwe yaseMerika: uLieutenant General Richard Ewell
Funda Ukubhala I-Inquiry Response Business Letter
Iirekhodi zehlabathi ze-1500-Meter
I-Standard Standard ye-Gold for Teachers
Ubomi bukaThomas Edison
Imiyalelo Efanelekileyo kunye neNgcaciso Eyaziwayo
I-Acid Anhydride Inkcazo
I-Tymolphthalein Indicator Solution